नेकपाकाे नाम र झण्डा विवाद , के छ कानुनी आधार ? - DURBAR TIMES
HomePoliticsनेकपाकाे नाम र झण्डा विवाद , के छ कानुनी आधार ?
नेकपाकाे नाम र झण्डा विवाद , के छ कानुनी आधार ?
नेकपा विभाजनकाे चरणमा पुग्नुभन्दा पहिले नै नाम र झण्डाकाे विवादले उग्र रूप लिइरहेकाे छ । नेकपाका दुवै पक्षले नाम र झण्डामा दाबी गर्दै निर्वाचन आयाेगमा निवेदन दर्ता गरिसकेका छन् । निर्वाचन आयाेगले भने निर्धारित अवधीभन्दा अघि नै याे विवाद टुङ्ग्याउने प्रतिवद्दता व्यक्त गरिसकेकाे छ ।
निर्वाचन आयाेगमा रहेकाे याे विवाद निरूपणमा कानुनी आधारहरू के छन् त ?
विवादरहित हिसाबले एउटै जानकारी आउँदा आयोगले अभिलेख हेरेर निर्णय लिन्छ । ‘तर, अहिले एउटै दलबाट दुई किसमिको जानकारी आएकाे छ ।
Previous articleप्रदेश १ का मुख्यमन्त्रीविरुद्ध उभिने नेकपाका ३७ सांसद (हस्ताक्षर गर्ने सांसदको सूचीसहित)
Next articleसंखुवासभामा प्रहरी र विप्लव समूहबीच गोली हानाहान